प्राय पुरुषहरु ना’म’र्द नै हुन्छन् महिलालाई स’न्तुष्ट बनाउनै सक्दैनन्
March 29, 2022 AdminLeaveaComment on प्राय पुरुषहरु ना’म’र्द नै हुन्छन् महिलालाई स’न्तुष्ट बनाउनै सक्दैनन्
हाम्रा वरिपरी हरेक दिन नयाँ र अ’नौंठा घ’टनाहरु भइरहेका हुन्छन् । हामीले केही घ’टनाहरुलाई नजर अन्दाज गर्छौ तर केही हाम्रो नजरमा पर्छन । यस्तै दुनियाँमा कुनै मानिसको अचम्मका चाहना हुन्छ । नेपालमा केही महिना पहिले एक युवतीले मलाई ग’र्भवती हुन मन छ तर विवाह गर्न चाहान्न भन्ने आषयसहितको कुरा बाहिर ल्याएपछि खुबै चर्चा भएको थियो ।
आमा बन्न चाहने तर श्रीमती वा पत्नी बन्न नचाहने युवतीको नाम सावित्री सुवेदी रहेको छ ।उनले नेपालमा आफुले केही नयाँ प्रयोग गर्न लागेको भन्दै पुरुषहरुलाई भाडामा लिएर गर्भवती बन्न चाहेको बताएकी थिईन् । चाहन भनौ या त चर्चामा आउने सिर्फ बहाना पनी हुनसक्छ । लाग्छ उनीहरुको कुरा सुन्दा र हेर्दा कतै केही त भइरहेको छैन ।
हो, रोमानियाकी एक २५ वर्षीया युवती एडेलिना अबलुले पनि यसरी नै विश्वलाई चकित तुल्याएकी छिन् । उनले कुनै अद्भुत काम गरेर विश्व को ध्यान आ’कर्षित गरेकी हैनन् कि उनको आश्चर्यचकित पार्ने चाहना ब्यक्त गरेर उनी चर्चित बनेकी हुन् । बेलायती अखबार द मिररका अनुसार अबलुले आफ्नो तस्वीर इन्टरनेटमा राख्दै लेखेकी छिन् मलाई ग’र्भवती बनाऊ ५ सय युरो पारिश्रमिक दिन्छु ।
५ सय युरो भनेको नेपाली लगभग ६३ हजार रुपैयाँ हो । समचारमा जनाइएअनुसार एडेलिनाले आफ्नो फेसबुक पेजमा यस्तो वि’ज्ञापन पोस्ट गरेकी हुन । उनले अगाडी लेखिन केटाहरु भेट्नु त ठूलो कुरा होइन् । तर म स’म्बन्धमा बसेर समय बर्बाद गर्न चाहन्नँ । बरु म त्यसका लागि पैसा तिर्छु । अहिले यो कुरा नेपालमा पनी व्यवहारिक बन्ने बाटोमा लागेको धेरैको बुझाई रहेको छ ।
हो, रोमानियाकी एक २५ वर्षीया युवती एडेलिना अबलुले पनि यसरी नै विश्वलाई चकित तुल्याएकी छिन् । उनले कुनै अद्भुत काम गरेर विश्व को ध्यान आ’कर्षित गरेकी हैनन् कि उनको आश्चर्यचकित पार्ने चाहना ब्यक्त गरेर उनी चर्चित बनेकी हुन् । बेलायती अखबार द मिररका अनुसार अबलुले आफ्नो तस्वीर इन्टरनेटमा राख्दै लेखेकी छिन्, ‘मलाई ग’र्भवती बनाऊ ५ सय युरो पारिश्रमिक दिन्छु ।
उनका छा तीमा थि पहिलो पटक नजर पुग्यो । “ओहो कति ठू “ला दू” ध” अनायस मेरो मुखबाट निस्क्यो
दार्चुलामा भारतले एकतर्फी डाेजर चलायपछी नेपाल प्रहरिले डाेजरको चाबी खोस्यो,भयो भागाभाग
दुर्गेश थापाको मृ,त्यु ? भखरै दुर्गेश थापाले गरे आ,त्मह,त्या !
दु:खद खबर! डीभी परेर अमेरिका गएका थियौ तर अब कहिल्यै नफर्किने गरी अस्तायौ(हा’र्दिक श्र’द्धा’ञ्जली )
स्तन ठुला बनाउन मन छ के गर्नहोला ? कि यति नै ठिक छ कमेन्ट गर्नुहोला